युगसम्बाद साप्ताहिक - प्रा. दाहालको ‘स्वेतधारा’ विमोचित
Saturday, 04.20.2019, 12:07pm (GMT+5.5) Home Contact
प्रा. दाहालको ‘स्वेतधारा’ विमोचित
Monday, 01.21.2013, 04:08pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । प्रा. पीस्ताम्बर शर्मा दाहाल रचित ‘स्वेतधारा’ विशेष काव्यको गत आइतबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति वैरागी काइँला र पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीले संयुक्त रुपमा विमोचन गर्नुभयो । कवि दाहालको यो दोस्रो काव्यकृति हो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रममा प्रा.डा खेमनाथ कोइराला ‘बन्धु’, प्रा.डा. मोहन तिमिल्सिना, यादव खरेल, समालोचक राममणि रिसालले नवकाव्यमा संग्रहित रचनाका विशेषताबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । लेखकले यो कृति न्यूजिल्याण्डको बसाइमा तयार गर्नुभएको र सो देशकै विशेषताबारे केन्द्रित छ । समारोहमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी र भाषासेवी कमलमणि दीक्षितको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।
सो अवसरमा कृतिकार दाहालले आफ्ना बाबु–आमा भानुभक्त¬–अयोध्यादेवी दाहालको स्मृतिमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठानका तर्फबाट आमा गृहकी संचालिका दिलशोभा श्रेष्ठलाई सम्मान गर्दै रु. २० हजार एक सय ११ को धनराशीको सहयोग रकम प्रदान गर्नुभएको थियो ।